Kung-Fu Wisa : niara-nikotrana ireo maître rehetra | NewsMada
Kung-Fu Wisa : niara-nikotrana ireo maître rehetra
Par Taratra sur 27/01/2016
Ho fanomanana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, izay hatao ny volana aogositra ho avy izao, sy hanomezana toromarika ary mba hampakarana ny lentan’ny kung-fu Wisa, nanatanteraka fanazarantena miaraka ireo «style» rehetra mivondrona ao anatin’ny federasiona, ny asabotsy 23 janoary lasa teo, tao amin’ny foiben’ny kung-fu Wisa Waishi Ampasapito. Tamin’izany no nanambaran-dRakotoarisoa Victor, filohan’ny federasiona, fa eo am-panomanana ny fanoloana ny biraon’ny seksiona sy ny ligy ary ny federasiona ny tomponandraikitra, ho an’ity taona 2016 ity. Ho vita aorian’ny fifaninanam-pirenena, izany.
Nolazain’ny Grand Maître Ny Avoko fa tsy maintsy tanterahina ny teny rehetra nolazaina. Araka izany, notontosaina ny alahady 24 janoary lasa teo, ny fizarana vary 2 t, ho an’ireo vahoaka sahirana miisa 1200, ka niara-kiasa tamin’izy ireo toy ny tao Antetezana Afovoany, Ambodinisotry, Ampefiloha Ambodirano, Andohatapenaka I sy II sy ireo hafa ny sefo fokontany maromaro. Tsy hijanona eo fa hitohy ny alahady 14 febroary ho avy izao, izany ka vary 8 t, no hozaraina amin’ireo distrika maromaro. Marihina fa fifanomezan-tanan’ny samy mpanao kung-fu ny nahazoana io vary 10 t io.
Ankoatra izay, nilaza ireo tomponandraikitry ny federasiona malagasin’ny kung-fu Wisa fa manaraka akaiky ny fizotran’ny raharaham-pirenena koa ny mpikatroka ity haiady ity, ka anisan’ny vahaolana izao fandraisana andraikitra ataon’izy ireo izao, ary manentana ny mpanao fanatanjahantena hafa, hifanome tanana amin’ny vahoaka, satria tsy natao hijanona ao anaty dojo ny fiaraha-monin’ny mpanao fanatanjahantena.